Izinto eziluncedo kuthi-kwiqela le-UP
Ishishini lophawu lwentengiso olutyalwe kwimizi-mveliso kunye nomzi mveliso ngokudibeneyo kunye norhwebo.
Inkampani yasePhanghai UPG yokurhweba kumazwe aphesheya yinkampani yorhwebo enobuchule etyalwe ngamashishini aphambili eqela le-UP kunye, inkampani iyeyona nto inomdla kwaye inefuthe kushishino lokushicilela kunye nokupakisha e-China.
Sinobuchule obuphezulu, umgangatho ophezulu, iqela elisebenzayo elizinzileyo kunye nelorhwebo
Ngendlela yexesha elide yokuthengisa, siyakhuthaza kwaye simisele iilwimi ezininzi, ubungcali, i-diathesis ephezulu kunye nabasebenzi bemfundo Eli qela, elenza amashishini amakhulu kunye anamandla kurhwebo. Phakathi kweqela lethu elisebenzayo, i-97% ifumana isidanga sokudibana kunye nesidanga se-bachelor, i-40% yamanqanaba aphakathi ezihloko zobungcali, isidanga sokuqala okanye ngaphezulu.
Sibambelela kwifilosofi yokuba "inkonzo enexabiso elingaphezulu kwexabiso, ubuvulindlela kunye nepragmatic, kunye nentsebenziswano yeWin-win"
Siqala kwinkqubo yokuyila, siphucule indlela yeziko, sihlakulele ngokuthe ngcembe kwaye senze ixabiso, kunye nenkcubeko yeshishini egxile "ekunyanisekeni nasekuthembeni kufanelekile, sikhuthele kwaye sithembisa, Sukela ukugqwesa nokusebenza ngokukuko, inkonzo enexabiso elingaphezulu". Sisoloko siqinisekisa umgangatho weemveliso kunye nenkonzo, ukuseka ubudlelwane bexesha elide kunye nozinzo lokusebenzisana nabathengisi basekhaya kunye nabathengi bethu bamanye amazwe ngezibonelelo ezifanayo.
Ukuphakama kobutyebi obuninzi, ukuhambelana nomgca, ukhetho oluphezulu
Sisekele ukusebenzisana okucwangcisiweyo kwexesha elide ngaphezulu kwama-50 endleko, umgangatho ophezulu kunye nodumo lwamashishini ophawu kunye neefektri, ezibandakanya ukushicilela kunye nokupakisha, ukutya kunye nokupakisha kwamayeza kunye nerabha kunye noomatshini beplastiki, kwaye benza udidi oluninzi, izinto ezininzi kunye nemultilevel ukudityaniswa okudibeneyo kunye nokubonelela ngokulula ijelo lenkonzo labathengi bamanye amazwe.
Kucwangciswe kakuhle, igalelo eliphezulu, ubhengezo olubanzi lokuboniswa
Utyalo-mali olukhulu lwemiboniso engaphezulu kwe-20 yamazwe aphesheya kunye nexabiso elingaphezulu kwesigidi esinye sentengiso ngonyaka zenza ukuba inkampani yethu yaziwe phesheya kolwandle kwaye ibe nodumo oluphezulu kurhwebo lwasekhaya nakwamanye amazwe. kushishino e China.
Ukomeleza ukwakhiwa kwesitishi, inkonzo kubathengi behlabathi, ipateni yokurhweba ngeendlela ezininzi
Ngama-years'effort aliqela, sithumele iimveliso kumazwe angaphezu kwama-80 (hayi i-Asiya kuphela kodwa neYurophu, i-Afrika, uMzantsi Melika, uMntla Melika kunye ne-Oceania) kwaye sisekele intsebenziswano yexesha elide nabasasazi kunye neendlela zokuthengisa kumazwe angaphezu kwama-40. kunye nemimandla, edlala indima ebalulekileyo kwimarike yangaphandle evulekileyo kunye nokugcina abathengi beenkonzo.